BB – Myanmar Live
ထိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း
Covid – 19 ဂယက်ရိုက်ခတ်! ဗန်ကောက်နယ်မြေအတွင်းရှိ လ.ဝ.က (တော်မော်) ရုံး ၃ နေရာကို ယာယီပိတ်သိမ်း
March 23, 2020 March 23, 2020 - by BB
လတ်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Covid – 19 အကျပ်အတည်းကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ဗန်ကောက်နယ်မြေအတွင်းရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး (တော်မော်) ၃ …
Entertainment / သတင်းများ / ဖျော်ဖြေရေး / မြန်မာ
ကာရိုက်တာအရလိုအပ်ရင်6pack ကြွက်သားတွေရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဇဏ်ခီ
February 12, 2020 February 12, 2020 - by BB
ဥပါယ်တံမျှင် ထာဝရနှောင်ကြိုးတဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ပရိတ်သတ်ကိုဖမ်းစားထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ်အနုပညာရှင် စုံတွဲဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတီးနားခီနဲ့ ဇဏ်ခီ တို့ဇနီးမောင်နှံကို ပရိတ်သတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ ခီမောင်နှံလို့ …
ထိုင်း / သတင်းများ / မြန်မာ
February 4, 2020 February 4, 2020 - by BB
သင့်ဆီဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဆိုတာမသ်ိနိုင်တဲ့ အနီးကပ်ဆုံးအန္တရာယ် “ငွေစက္ကူအတု” ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလို့လက်ခံမိခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ပဲအတန်ကြီးပါစေ “ရိုးရိုးစက္ကူ” တစ်ရွက်လောက်သာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ခုတလောမှာ သေချာသိတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၂ဝ …
အထူး MOU ပြုလုပ်ရာတွင် လုပ်သား ၅ ဦးထက်မပိုသော အလုပ်ရှင်များအား “Fast Track Lane” ဖွင့်ပေး
January 28, 2020 January 28, 2020 - by BB
OSS စင်တာတွင် ဝေါ့ပါမစ်လာရောက်ပြုလုပ်သည့် ၃ နိုင်ငံလုပ်သားအရေအတွက်များပြားခြင်းကြောင့်အချိန်မီပြုလုပ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရှင်များအားအဆင်ပြေချောမွေ့မှုစီစဉ်ပေးရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးမှ အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးထံ မိန့်ကြားထားသည်။ အချိန်ကုန်သက်သာစေရေးနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် …
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး ဆေးကြောင်ပြီး လူမြင်ကွင်းမှာ ATM ပုံဖောက်
January 22, 2020 January 22, 2020 - by BB
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ဖခနုန်မြောက်ပိုင်း၊ စူခွန်ဝစ်လမ်းအမှတ် (၇၁) လမ်းရှိ မက်စ်ဝေလူ ကုန်တိုက်ရှေ့တွင် မြန်မာ နိုင်ငံသားတစ်ဦး …
ဘန်ကောက်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ခရိုင်များနှင့် PM 2.5 အကျပ်အတည်း
January 21, 2020 January 21, 2020 - by BB
ဘန်ကောက်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ခရိုင်များတွင် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ၂.၅ မိုက်ခရိုမီတာ ထက်သေးငယ်သည့် ဒြပ်မှုန်များ ပြန့်နှံ့နေသည့် လေထုညစ်ညမ်းမှုအကျပ်အတည်းသည် ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ယနေ့ …
၂၀၂၀ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ – ၂၆ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာဟောစာတ
January 20, 2020 January 20, 2020 - by BB
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီအပတ်အတွင်း အလုပ်ကိုငြီးငွေ့နေမည် စိတ်ရှည်သည်းခံပါ အလုပ်ဟောင်းကိုချက်ချင်းမစွန့်ဘဲ အလုပ်အသစ်ကို ရှာပါ စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့ ချစ်သူရည်းစားရှိသူများ အချစ်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့လိုက်မယ် …
Uncategorized / ထိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / မြန်မာ
မြန်မာ – ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သမားအစည်းအဝေးတွင်CI စာအုပ် ထုပ်လုပ်ပေးရေးစင်တာထပ်မံဖွင့်လစ်ပေးရန်မြန်မာအစိုးရတောင်းဆို !!
January 17, 2020 January 17, 2020 - by BB
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြတဲ့ ထိုင်းရောက်မြန်မာများ၏ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည့် အလုပ်သမားများအား သက်တမ်းတိုးပေးနိုင်ရေးနှင့် အလုပ်သများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြားအကြောင်းအရာများကို ဇန်န၀ါရီလ …
ပလတ်စတစ်ရေစည်ပိုင်းအတွင်း ခိုးအောင်းလိုက်ပါလာသည့် တရားမ၀င်မြန်မာ ၆ ဦးအဖမ်းခံရ!!
January 16, 2020 January 16, 2020 - by BB
ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က တာ့ခ်ခရိုင်၊ မဲ့ဆောက်မြို့ မဲဆောက်-တာ့ခ်သွားလမ်းမကြီး ဟွေ့ဟင်ဖွန် လုံခြုံရေးဂိတ်မှာ လဝကရဲနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များစောင့်ကြပ်စစ်ဆေးနေစဉ် …
လုပ်သားကျန်းမာရေးအတွက် “ပရကန်စံခုမ်း” ဟာဘယ်လောက်အရေးပါလဲ
January 14, 2020 January 14, 2020 - by BB
ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ရေလုပ်သားများလည်း အခြားလုပ်သားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားများနည်းတူ လုပ်ငန်းခွင်အပြင်၌ နာမကျန်းဖြစ်လျှင်လည်း ပရကန်စံခုမ်း သို့ လူမှု့ဖူလုံရေးအာမခံ ဖြင့်ဆေးရုံသွား …